Ukunta ukunta | February 2020
Inkasta oo ukumo boodheedu ay caan ku tahay caanaha, waxay muddo dheer ku guuleysteen saamigooda suuqa. Rugaha dukaanka, boggaga majaladaha caanka ah iyo internetka, waxaynu ka heli karnaa macluumaad badan oo xaqiijinaya faa'iidadooda, baahida loo qabo in lagu daro cuntada maalinlaha ah si loo ilaaliyo hawlaha jidhka oo wanaagsan.
Waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee ukunta shimbiraha, kuwa ugu caansan ee ku jira cuntadeena waa digaag iyo digaagduur. В этой статье мы попробуем разобраться, можно ли употреблять их в сыром виде, в чем состоит разница между теми и другими, и насколько она существенна.Cabbiraadda iyo qiimaha nafaqada ee ukunta cayriinka Sida ku cad shuruudaha muhiimka ah ee cuntada, ukumaha shimbiruhu waxay leeyihiin tilmaamahan soo socda 100 g: digaag: borotiinka - 12.7 g (maalin kasta - 27.6%); dufanka - 11,5 g (gunno maalmeedka - 20,%); carbohydrates - 0.7 g (gunno maalmeedka - 0.3%); dufanka dufan ee dufanka badan - 3.4 g (heerka maalinlaha ah - 18.9%); dufanka laydhka ah ee lafdhabarta - 1.9 g (heerka maalinlaha ah - 31.8%); 3,6 g (gunnada maalinlaha ah - 10.1%); bakeeriga: borotiinka - 11.9 g (heerka maalinlaha ah - 25.9%); dufanka - 13.1 g (heerka maalinlaha ah - 23.4%); carbohydrates - 0.6 g (gunno maalmeedka - 0.2%); dufanka dufan ee dufanka badan - 3,5 g (heerka maalinlaha ah - 19.1%); dufanka asaasiga ah ee dufanka leh - 1.3 g (gunno maalmeedka - 22%); dufanka asaliga ah ee aan la karin - 4.3 g (qiimaha maalin walba - 12%).
Intee jeer oo ukumo ah ayaa digaagduur qaata maalin kasta, iyo waxa ukumuhu ku xiran yahay
Xayawaan kasta oo xayawaan ah wuxuu u baahan yahay inuu abuuro xaaladaha ugu raaxeysiga ee waxqabadka nolosha oo buuxa, iyo gaar ahaan kuwa u baahan "khidmad" nooc ah oo ay ku nool yihiin noloshooda. Xeerarkan waa in si adag loo raacaa kuwa leh hanti beecis.
Sida loo qaato ukumada boodhadhka: bacdameeda iyo waxyeellada
Dad badan ayaa laga yaabaa in ay maqlaan faa'iidooyinka ukunta digaagduur. Cuntadani waxay ku saleysantahay fiitamiinno, asiidhyada amino iyo waxyaalo kale oo waxtar leh. Laakiin maanta waxaan ka hadli doonaa ukumaha, laakiin ku saabsan qolofka. Nooc Qolalka ukunta digaagduurtu waxay ka kooban tahay walxaha macdanta ee soo socda: Macruufiyeyaasha - kalsiyum, birta, magnesium, fosfooraska; caanaha raadraaca - manganese, copper, molybdenum, sulfur, fluorine, zinc, selenium, silicon; amino acids - methionine, lysine, cystine, isoleucin.
Sidee si dhakhso ah u jebin kartaa ukunta digaaga
Ukunta ukumaha badanaa waxaa loo isticmaalaa karinta iyo kareemka jirka (oo lagu sameeyo maaskaro), iyo sidoo kale cuntada ilmaha, gaar ahaan carruurta ay ku dhacdo diathesis. Isla mar ahaantaana, dadku waxay badanaa la kulmaan dhibaato - sida loo jajabiyo si ay qaybo yar oo qolof ah u gasho cuntada. Tixgeli hababka noocan ah ee jira.
Aqoonsiga miisaanka ukunta digaaga
Ukunta quailka waxaa lagu qiimeeyaa wax ka badan digaagga, sidaa daraadeed qaar badan oo ka mid ah asxaabteena waxay rabaan inay qaataan hawsha adag sida quudinta. Nidaamkani wuxuu leeyahay buuq badan, laakiin waxa ugu muhiimsan ee xiisaha wax soo saar kasta wuxuu ahaa su "aalna ah". Immisa ukun ayaa ah digaagduur, maxay tahay ballaadhanka iyo waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato halbeegga - akhriso.
Ukumaha digaaga ayaa had iyo jeer loo tixgeliyaa cunto nafaqo leh oo nafaqo leh oo bini'aadam ah. Waxaa laga heli karaa qaboojiyaha oo ku dhow aqal kasta oo guri. Laakiin dhawaanahan, ukumaha digaagduurku waxay noqonayaan kuwo aad u caan ah, maxaa yeelay waxaa loo tixgeliyaa in ay yihiin kuwo faa'iido badan leh iyo digaaga marka loo eego ukumaha digaaga. Ma run ahaantii sidaas - aynu wada fahamno.
Faa'iidooyinka iyo waxyeellada ukunta boodhadhka carruurta
Faa'iidooyinka ukunta boodhadhka carruurta ee carruurta ayaa shaki badan. Tani waa badeecad dabiici ah oo leh xoog saarida walxaha qiimaha leh ee jirka. Waxa lagu xusay papyrus ee Masar hore iyo buugaagta ee bogsiinta dadka Chinese. Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo xaqiiqda ah in jidhka ilmaha uu daciif yahay marka loo eego kan weyn oo aad u xasaasi ah.
Sanadihii ugu danbeeyay, tirada digaagdaha dabiiciga ah ayaa aad u yaraatay, sidaas darteed, si loo kordhiyo tiradooda, ma aha oo kaliya beeraha takhasuska ah ayaa ku hawlan tarankooda, laakiin milkiilayaal badan oo gaar loo leeyahay ayaa si wadajir ah ula koraya wakiillada gudaha iyo kuwa danyarta ah ee shimbiraha. Waxay labadoodaba u koraan hilibka iyo ujeedada soo saaridda ukunta, taas oo loo tixgelinayo faa'iido badan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Ukunta ukunta 2020